Ny zava-misy mampalahelo amin'ny fahasambarana | Martech Zone
Ny zava-misy mampalahelo amin'ny fahasambarana
Alakamisy Oktobra Oktobra 26, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Mino aho fa tompon'andraikitra amin'ny fahasambarako manokana aho. Betsaka ny fitaomana ivelany (vola, asa, fianakaviana, Andriamanitra, sns.) Fa amin'ny farany, izaho no manapa-kevitra raha faly aho na tsia.
Androany maraina, nijery ny vaovao aho ary nopetahana tamin'i Madonna ao amin'ny Oprah izay manazava ny fananganana zaza avy any Afrika. Ny tena nahagaga ahy dia ny filazan'ny olona maro fa zavatra lehibe nataon'i Madonna izany ka hitondra fahasambarana ho an'ilay zaza.
Nisento momba an'io teo amin'ny tranokalako aho taloha, saingy mampihomehy fotsiny izany. Maninona ny fiarahamonintsika no mampifangaro ny faharanitan-tsaina, talenta ary fahasambarana foana amin'ny harena? Ka i Madonna hanao reny tsara kokoa noho izy manankarena? Angamba ilay trano fitaizana zaza kamboty izay nananan'ilay zazalahy dia nanana olona mahafinaritra izay tia sy mikarakara azy. Tsy isalasalana fa tena matoky aho fa hanana mpikarakara ao ambany i Madonna. Inona ary no mahasamihafa azy?
Ny vola no hampifaly an'ity zaza ity? Azonao antoka ve izany? Efa nahita ny fiainan'ny ankizy kintana rock na olona nanan-karena ve ianao? Betsaka amin'izy ireo no ao anatin'ny fanarenana sy ivelan'ny fiainana ary miady amin'ny fiainany manontolo mba hampalaza azy ireo. Ny harena dia mitondra andiana olana vaovao tanteraka amin'ny fiainana (na izany aza ny olana tiako hananana). Ary koa, te hanana an'i Madonna ho renim-pianakaviana ve ianao? Tsy hanao izany aho! Tsy miraharaha izay vola ananany aho… efa nahita an'i Madonna be loatra tamin'ny fiainako aho mba hanaja azy tokoa.
Angamba angamba ity dia momba ny fahasambaran'i Madonna kokoa noho ilay zaza. Mampalahelo izany, saingy heveriko fa izany no izy. Tsy mino aho fa zaza nesorina tamin'ny kolontsainy, ny tanindrazany, ny fianakaviany dia manana fotoana ahazoana fahasambarana miaraka amina Rock Star mametraka an'i Neny ho Neny.
Tany amin'ny trano fitaizana zaza kamboty ilay zazalahy voalaza fa tsy afaka nikarakara azy intsony ny rainy. Tsy afaka maminavina momba ny kolontsaina hafa sy ny fomba fanabeazana azy ireo izahay. Amerikanina maro no ho taitra amin'ny kolontsaina sasany sy ny fomba hikarakarana na hikarakarana ny ankizy. Angamba tena tian'ilay rangahy ny zanany lahy ka natolony ny olona iray izay afaka nanome sakafo azy. Mety hitaky fitiavana tsy mampino izany.
Ahoana raha toa ka tsy niantsena zaza i Madonna fa nanangana famatsiam-bola maharitra fotsiny hanamorana ny fanabeazana, ny loharano ary ny indostria tsara kokoa ho an'ny faritra notsidihiny? Mety nisy fiantraikany tamin'ny fahasambaran'ny olona maro hafa izy. Angamba ilay zaza natsangany ho sambatra kokoa tamin'izay.
Tena tiako i StumbleUpon
API… Iza no manangana APUI?
Oct 27, 2006 amin'ny 6: 29 AM
Andriamanitra mahatonga ny zavatra rehetra hiara-miasa ho an'ireo tia an'Andriamanitra sy voantso ho amin'ny fikasany… manam-pinoana!
Oct 30, 2006 amin'ny 6: 15 AM
Zahao hoe http://gather.com/ - Ny vohikalan'ny tambajotra sosialy NPR dia mandatsa-bato ankehitriny: